जुम्लामा यो वर्षकै चिसो : माइनस ७.५ डिग्री तापक्रम - Sudur Khabar
महाकाली नदीमा आधा दर्जन पुल बन्छन्ः भारतीय राजदूत राय अझै राहत पाएनन् दौड तोलेनीका बाढीपीडितले २५ क्षमताको कारागारमा ४८ जना कैदी ! ममताको उपचारका लागि १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ सहयोग राष्ट्रपतिको छोरीको हातमा सुनैको बाला ! हिराजडित औँठी, घाँटीदेखि सिउँदोसम्म गहनैगहना ! जुम्लामा यो वर्षकै चिसो : माइनस ७.५ डिग्री तापक्रम
काठमाडौं : जुम्लामा बुधबार यो वर्षकै चिसो महशुस गरिएको छ । जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम माइनस ७.५ डिग्री सेल्सियसमा झरेको जल तथा मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । गएको वर्ष जनावरी ११ तारिखमा माइनस ४.९ डिग्री रहेको जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम यो वर्ष ३ डिग्रीले धेरै हो ।
यस्तै जोमसोमको माइनस ६ डिग्री मापन गरिएको छ ।
काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम बुधबार २ दशमलव ४ डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ । महाशाखाका अनुसार गएको वर्ष आजको न्यूनतम तापक्रम ७ डिग्री सेल्सियस थियो ।
धेरै ठाउँमा पानी परेपछि देशभरी नै चिसो बढेको हो । आज दिउँसो लुम्लेमा १.६ मिलिमिटर पानी पनि परेको छ ।
आज राती पश्चिमी उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात हुने महाशाखाले जनाएको छ ।